Vaccine Rewards - Somali / COVID-19 Updates and Information - State of Minnesota
Waad ku mahadsan tahay qaadashada talaalka!
Barnaamijka Talaalkaaga Xagaaga ee Minnesota ayaa dhammaaday mana aqbalayno hadda kadib soo gudbinta codsiyada.
Haddii aad horay u codsatay abaal marin, waan ka shaqaynaynaa codsigaaga waana kula soo xariiri doonaa dhawaan. Xog badan ka ogoow halkaan sida aad ku heli doonto abaalmarintaada. Wixii su'aalo ah oo ku saabsan soo gudbinta abaal marintaada, wac Laynka Tooska ah ee COVID-19 ee MDH (833) 431-2053 Isniinta ilaa Jimcada 9 a.m. - 7 p.m. iyo Sabtida 10 a.m. - 6 p.m.
Haddii aan wali lagu talaalin, waxaad heli kartaa goob kuu dhoow adoo adeegsanaaya Jaantuska Sheegaha Goobta Talaalka.
Haddii aad qaadatay kuurada koobaad ee talaalka Pfizer ama Moderna, fadlan xasuusnoow inaad qaadato kuurada labaad ee talaalkaaga xiliga laguu mudeeyay. Haddii aad u baahan tahay inaad mudaysato kuurada labaad, booqo mn.gov/vaccine si aad kuu hesho talaal bixiye kuu dhow.
Waad ku mahadsan tahay qaadashada talaalka markale! Talaal kasta wuxuu dhisayaa difaac bulsho oo balaaran, waxaana u baahan nahay inaan difaacno nafteena iyo dadka kale ee ku dhaqan Minnesota.